OTU ESI ECHEKWA PASWỌỌDỤ NA MOZILE - MOZILLA FIREFOX - 2019
Otu esi echekwa okwuntughe na Mozilla Firefox nchọgharị
Mozilla Firefox bụ ihe nchọgharị na-ewu ewu nke nwere ọtụtụ ihe bara uru nke na-eme ka web sọọfụ dị ka nke ọma. Karịsịa, otu n'ime njirimara bara uru nke ihe nchọgharị a bụ ọrụ nke ịchekwa okwuntughe.
Ịchekwa okwuntughe bụ ngwá ọrụ bara uru na-enyere aka ichekwa paswọọdụ maka ịbanye n'ime akaụntụ na saịtị dị iche iche, na-enye gị ohere ịkọwa paswọọdụ n'otu oge na ihe nchọgharị - oge ọzọ ị ga-aga na saịtị, usoro ahụ ga-eji dochie anya ikike ikike.
Olee otú iji chekwaa paswọọdụ na Mozilla Firefox?
Gaa na weebụsaịtị nke ị ga - abanye na akaụntụ gị, wee tinye ozi nbanye gị - nbanye na paswọọdụ. Pịa Tinye.
Mgbe ịbanye nbanye nke ọma, a ga-akpali gị ịchekwa nbanye maka saịtị dị ugbu a na akuku aka ekpe nke ihe nchọgharị Ịntanetị. Kwere nke a site na ịpị bọtịnụ ahụ. "Cheta".
Site na mgbe a, mgbe ị banyeghachiri na saịtị ahụ, a ga-etinye aka na data na-akpaghị aka, yabụ na ị dị mkpa ka pịa bọtịnụ ahụ "Nbanye".
Kedu ihe ma ọ bụrụ na nchọgharị anaghị enye ịchekwa paswọọdụ?
Ọ bụrụ na, mgbe ịkọchara aha njirimara na paswọọdụ, Mozilla Firefox adịghị enye ịzọpụta aha njirimara na paswọọdụ, enwere ike chee na nhọrọ a nwere nkwarụ na ntọala ihe nchọgharị gị.
Iji rụọ ọrụ ọrụ nchekwa ozi, pịa bọtịnụ menu n'akụkụ aka nri dị elu nke ihe nchọgharị gị, wee gaa "Ntọala".
Na njikwa aka ekpe, gaa na taabụ "Nchebe". Na ngọngọ "Logins" jide n'aka na ị nwere nnụnụ na nso ihe "Cheta abanye maka saịtị". Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, tuo, wee mechie windo ntọala.
Ọrụ nke ịchekwa okwuntughe bụ otu n'ime ngwaọrụ kachasị mkpa nke nchọgharị Mozilla Firefox, nke na-enye gị ohere ịghara iburu n'uche ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke logins na okwuntughe. Atụla egwu iji njirimara a, n'ihi na okwuntughe na-ezoro ezo site na ihe nchọgharị gị, nke pụtara na ọ dịghị onye ọzọ nwere ike iji ha ma e wezụga gị.